साङ्लाको जुस ! तपाईंलाई कस्तो लाग्छ ? - नेपाल समय
चीनको शिचांग शहरमा एक औषधि उत्पादक कम्पनीले प्रत्यक वर्ष पाँच सय करोड साङ्ला उत्पादन गर्ने गरेको छ । त्यसका लागि यसले साङ्ला पालन नै गर्ने गरेको छ । शिचांग शहरको एउटा ठूलो क्षेत्रफलमा भवन निर्माण गरी साङ्ला पाल्ने गरिएको साउथ चाइना मोर्निङ पोष्टले जनाएको छ ।
गर्लफ्रेन्डलाई अन्डरवाटर प्रपोज गर्दा मृत्य...